Community & Society » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths III	3
Posted by Kyaemon on May 9, 2016 in Community & Society, Education, Opinion - Op-ed, Photography, Q&A, Think Different, Travel |3comments
လှုပ်သာလောက်ရှိလို့ဘေးဥပါဒ်မရှိပါ Richter6and above – Called disaster area. Significant damage.
ခုထိတခါမှမဖြစ်တော့ပါ, In either Mogaung or Kamaing segment (of Sagaing Fault), an M 7.6 earthquake took
Both > 100 km away and M 6.3, one in Feb 1962 and the other Oct 1929 near the China border.
kai says: သိပ်တော့လည်း အပိုင်တွက်လို့မရ..။
အိုဘယ့်.. မြန်မာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Thint Aye Yeik says: .မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လက်ခံလိုက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တာဟာ မြန်မာပြည်အနာဂတ်အတွက် ဆုလာဘ်တစ်ခု လို့….. ၆၀ % လောက် သေချာရင်တော့….
uncle gyi says: ကန့်ကွက်သူတွေကိုအကုန်ထောက်ခံတယ်